२०७४ को अन्तिम दिन ४.२२ अङ्क बढ्यो नेप्से | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर २०७४ को अन्तिम दिन ४.२२ अङ्क बढ्यो नेप्से
मुख्य खबर, लगानी 100 views
२०७४ को अन्तिम दिन ४.२२ अङ्क बढ्यो नेप्से
चैत २९, काठमाडौं (अस) । वर्ष २०७४ मा शेयर कारोबार हुने अन्तिम दिन बजार बढेर बन्द भएको छ । अब, बजारमा २०७५ बैशाख २ गतेदेखि कारोबार हुन्छ । २०७४ को वर्ष लगानीकर्ताहरुको लागि निराश कै वर्ष रह्यो । यस वर्षमा बजार थोरै दिन बढेर धेरै दिन घटेको छ । तर वर्षको अन्तिम दिन कारोबार भएदेखि बढेको बजार अन्त्यमा ४ दशमलव २२ अङ्क बढेर १ हजार २ सय ७७ दशमलव ५५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
यस दिन १ सय ६५ कम्पनीको ५ हजार ९ सय ६३ पटकको व्यापारमा १३ लाख २९ हजार ९ सय ३० कित्ता शेयरको रू. ४४ करोड ३० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । म्यानुअल कारोबार रू. ५४ लाख ४६ हजार बराबर रहेको छ । कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचकमा बैङ्किङ र वित्त समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी सात समूहको परिसूचक बढेको छ । नविल बैङ्क लिमिटेडको संस्थापक शेयर प्रतिकित्ता रू. ८ सय ४ मा रू. २ करोड ४६ लाख बराबरको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ ।
कारोबार भएका १ सय ६५ कम्पनीमा ८८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ६३ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, १४ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य ६ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको छ भने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक तर्फको शेयर ९ दशमलव ९२ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार भएको दिनको तुलनामा ५० दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ । रू. १४ करोड ९५ लाख बराबर कारोबार रकम बढेको हो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव २७ प्रतिशत बढेर २ सय ७२ दशमलव ४५ अङ्क पुगेको छ । त्यसैगरी, यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अर्थात् ५२ दशमलव ११ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । नेप्सेको एडी रेशियो १ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ । यसले बजार वुलिश वृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।